WAA INAAN BIXINAYAA HAMBALYADA SARE
Taangiyadaha caadiga ah & maraakiibta, oo ay ku jiraan qaybaha dheeri ah, ayaa laga been abuuri karaa qaab kasta ama qaabeyn kasta, taasoo muujineysa dabacsanaanta ay ka mid tahay kuwa ka kooban FRP. Isticmaalida tikniyoolajiyadda iska leh, waxaan awood u leenahay soo saarista taangiyada iyo maraakiibta iyadoo la tixraacayo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha ee geedkayaga ka dibna si badbaado leh ugu gee goobtaada. Haamaha waaweyn ee cabirka weyn, waxaan awood gaar ah u leenahay inaan isla dhisi karno bartilmaameedkaaga saxda ah, iyo magaca ugu badan ...
Taangiyada muraayadaha labajibbaarada leh waxaa lagu habeyn karaa lagana soo saari karaa qaabab kala duwan, cabbirro, midabyo, dhumuc ahaan, xaallado adeegyo loogu tala galay, dahaar, aagag warshadeed, iwm loogu talagalay tamarta nukliyeerka iyo warshadaha qiiqa iyo macdanta. Jrain wuxuu dejiyay degenayaasha qaab-dhismeedka mashaariic badan. Mashaariicda kaladuwan, resins kala duwan ayaa loo xushay inay la kulmaan shuruudaha adeegga kala duwan. Kala ...
Nadiifiyayaasha Fiberglass waxay caan ku yihiin keydinta dareeraha, daaweynta biyaha, nidaamka FGD, maareynta kiimikada iyo xakamaynta wasakheynta, habraaca nadiifinta gaaska, xakameynta qulqulaya gaasaska, gaar ahaan gaasas wasakhaysan, gubashada qashinka iyo geedi socodka koronto dhalinta. Sababtoo ah: Marka la barbar dhigo badeecadaha birta ka samaysan ee bir ama bir-caag ah, Fiberglass caag ah oo xoojisay (FRP) waxay leedahay faa'iidooyin badan. FRP waa mid aad u culus-culeys, aad u xoog badan waxaana lagu soo saari karaa dheeman ballaaran, oo leh saameyn toos ah ...
Xarkaha loo yaqaan 'Fiberglass clarifier iyo dejiyaha ayaa ka fudud alaabada bir ee caadiga ah, waxayna kaa caawinaysaa inaad hesho faahfaahinta ugu habboon ee wadajirka iyo isu-ururinta marka laga reebo alaabada. Jrain waxay bixisaa taangiyada muraayadaha muraayadaha lebenka leh iyo sharraxayaasha, deggeneyaasha, biyo mareenka, tuubbada ama daboolida, ururinta iyo waxtarka (hirarka) biyaha, biyaha wasakhda leh, macdan qodista iyo codsiyada kale ee warshadaha. Wejiyada weelka qulqulaya qaybaha ayaa wasakhda u gudbiya ceel qiiq leh. Intii lagu gudajiray dhaqdhaqaaqa soo laabashada, qeybaha qaab-dhismeedka qeybaha ...
Daboollada Fiberglass waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa biyaha iyo daaweynta bullaacadaha, kiimikada iyo batroolka, cuntada, farmasiiga, iwm. Daboolida fiberglass waxay ku kala duwan yihiin midabbo iyo qaabab sida wareega, afar gees, arch, guri, nooca guriga, iwm sida macaamiisha looga baahan yahay. Daboollada Fiberglass waxaa had iyo jeer loogu talagalay inay la kulmaan heerkul aad u ballaaran, dusha sare ee dusha sare waa mid cajiib ah oo u adkeysaneysa xaaladaha adag ee deegaanka, waxay ka dhigeysaa fiberglass wax walboo fiican u leh soo-gaadhista waxyaabaha, ay ka mid yihiin qorraxda, s ...
Qalabka Fiberglass guud ahaan waxaa laga sameeyaa geedi socod gacan-qaadis ah, oo ay kujiraan waxyaabo aad u sarreeya. Qaabab kala duwan ayaa lagu xaqiiqsan karaa iyadoo la isticmaalayo caaryada. Kaydinta kaladuwan ayaa loo dooran karaa shuruudo dhexdhexaad iyo adeegyo kala duwan. Wixii qalab ah oo ku habboon cabbirrada iyo qaababka ayaa la heli doonaa markii la codsado. Qalabka Fiberglass-ka ayaa aad caan u ah maadaama ay soo bandhigayaan: • Xoog weyn marka loo eego culeyska • Xakamaynta korantada iyo kuleylka • U adkeysiga nabaad-guurka iyo kiimikooyinka • Iska caabbinta saameynta ...
Muraayadaha Jrain waxaa lagu shaandheeyay hal gabal waxaana ku jira weelka qulqulaya oo aan sagxadda lahayn. Qiimaha goleyaasha wax ku oolka ah waxay u oggolaadaan si wax ku ool ah goynta goobta si loo yareeyo qashinka qashinka iyo xirmooyinka xamuulka qaada ee labada dhinacba waxay u oggolaanayaan in la isticmaalo iyada oo aan dhinacna laga helin taageero joogto ah. Dareemida maqaar-gacmeedka miraha fiberlass-ka ee Jrain ayaa si weyn uga fudud miisan culeyska macdanta birta ah iyo waxyaabaha kujira xayndaabka sare ayaa bixiya iska caabin heer sare ah waxayna u baahan tahay dayactir aad u yar. Arrin nabadgelyo sare ayaa lagu guuleystaa ...
Tuubbooyinka fiberglass-ka waxaa ka mid ah tuubbooyinka fiberglass-ka saafiga ah, tuubooyinka ciidda, tuubbada ka-saarista, tuubbada laba-laate ah (oo leh PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, iwm.) Iyo wixii la mid ah dhismaha derbiga ee nidaamka tuubbooyinka fiberglass-ka wuxuu ka kooban yahay saddex lakab: 1．Layli: wuxuu go'aamiyaa iska caabbinta ugufiican ee dhex-dhexaadka. 2．Lakabka qaab-dhismeedka: wuxuu bixiyaa xoog farsamo yaqaan sare iyo iska caabbinta xamuulka. 3．Maqaarka kore: wuxuu ka ilaaliyaa nidaamka tuubbada cimilada, galinta kiimikada iyo shucaaca UV. Waxay aad u jecel yihiin in warshado badan ay noqdaan ...
Jrain FRP, oo ku taal magaalada Hengshui ee dalka Shiinaha, waa soo saare xirfad-yaqaan soo saare ka kooban badeecado kala duwan. Waxaan soo saarnay badeecooyin kala duwan oo caaga ah (fiberlass) lagu xoojiyay oo balaastig ah (FRP) laga soo bilaabo 2008dii welina waxaan ku firfircoonnahay hagaajinta badeecada, geeddi-socodka iyo horumarka suuqa. Ilaa hadda waxaan haysanaa aqoon-isweydaarsiga 5000m2, oo leh mashiinka dabaysha, qalabka faakiyuumka iyo wasakhooyinka, iwm. Waxaa nalagu caddeeyey Nidaamka Maamulka Tayada ISO9001. Waxaan sidoo kale ku qalabeysan nahay sheybaar laxiriira iyo qalabka tijaabada xirfada 'FRP'. Waxaan naqaanaa lambarro badan oo caalami ah oo la xiriira ka dibna waxaan soo saareynaa alaabada ku saleysan iyaga sida ASME, ASTM, BS EN.
LATEST NEWS KU SAABSAN JRAIN
Sinochem International iyo Machadka Cilmi baarista ee Shanghai ee Wershadaha Kiimikada Co., Ltd (Machadka Kiimikada ee Shanghai) waxay si wada jir ah u aasaaseen “Sinochem - Machadka Kimikada Chemical Composite Mat labour labo labo labo labo labo” oo kuyaala Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park. Kani waa soo dejin kale ...
Baarayaasha Shiineysku waxay horumariyaan aerogels kaarboon culus oo dabayl culus leh
Waxaa dhiirrigeliyay dabacsanaanta iyo adkeysiga websaydhyada dabiiciga ah ee caarada, koox cilmi baaris ah oo uu hoggaaminayo Prof. YU Shuhong oo ka socda Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha (USTC) ayaa soo saartay qaab sahlan oo guud oo lagu been abuuro superelastic iyo daal u adkeysan kara aerogels kaarboon culus oo leh nanofibrous ...
AOC Aliancys waxay biloowday inay Shiinaha ka soo saarto AOC Resins
AOC Aliancys waxay ku dhawaaqday: AOC Aliancys (Nanjing, China) waxay bilaabeen inay soosaaraan AOC resins iyadoo la raacayo qaaciddada laga soo dejiyo xarunta dhexe ee Mareykanka Dhamaan xogta alaabooyinka cusubi waxay buuxiyeen shuruudaha naqshadaha, taas oo macnaheedu yahay badeecada taxanaha ah ee AOC Aliancys ee soo degtay Shiinaha si rasmi ah ...
Mashiinka Dabaysha ee FRP, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Dhoolatus gacmeed, Caaryada, Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha Fiberglass,